အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅	42
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
Posted by kai on Nov 5, 2015 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 42 comments
“ကျမက သမ္မတရဲ့ အထက်မှာရှိနေမှာပါ။ ဒါက ရိုးရှင်းတဲ့ သတင်းစကားပါပဲ။ အခြေခံဥပေဒမှာလည်း သမ္မတအထက်မှာ ရှိနေတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိလို့ ဒါက ဥပဒေချိုးဖောက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်သွားမှာပါ။ ထိပ်ကနေပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာ ခေါင်းဆောင်ပဲပေါ့”
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယဉ်ကျေးမှု အယောင်ဆောင် မပါတဲ့
စကားးကို အရိုးရှင်းဆုံးး ပြောတတ်လို့ ကို အထင်ကြီးးရတယ်.. မြန်မာတွေ က စကားးကို သကာအုပ်ပြောမှ နားးခံသာကြတာ… တွေ့ အူးးမှာပါ..
စကားးပြတ်ပြတ်ပြေရရင် ကို စိတ်ဆိုးးတယ် မှတ်ကြတဲ့ အမျိုးးတွေ နဲ့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ဒေါ်စုတို့များ.. တော်တော်ကို ဗြောင်ပြောချလိုက်တာပဲ..။
သူလုပ်တာနဲ့.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးခေတ်သစ်ကြီးထဲ.. ၀င်သွားဦးမယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. သမ္မတအတွက်မဲဆွယ်နေတဲ့.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပါ..ထိုင်ငိုသွားလောက်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီလောက် ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်ယုတ်မာ လွန်း တဲ့ သူတွေ ကို ဒီလို လုပ်မှ။
.ပြည်သူတွေ က လဲ သူ့ ကို အားကိုးပြီး နေတာ မို့
ဒါထက်ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ အားရှိစေတဲ့ စကား မရှိတော့ဘူး။
.နောက်ပြီး မဆိုင်တဲ့ ၂၅% မျက်နှာပြောင်တိုက် ဝင်ထိုင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ရှိတာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဘဲ ရှိပါ့။
အာဏာရူးများကလွဲ လို့ ဘယ်သူမှ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်လို့ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး။
kai says: နားလည်သလောက်ကတော့.. အဲဒီ ၂၅%ရှိနေလို့.. ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာဗျ..။
၂၀၁၀ မှားခဲ့တဲ့အမှားကို.. ပြန်ဆပ်လိုက်ရတယ်သဘောထားပါ..။
pooch says: NLD သမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားတယ် နိုင်ခဲ့ရင် (အမှန်တိုင်းဖြစ်လာရင်ပြောတာ)
တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ နိုင်ပြီးသားပဲ ပြောစရာကိုမလိုတာ မနေ့က အလုပ်ထဲက နိုင်ငံခြားသားကျောင်းအုပ်က လာမေးတယ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ နင်တို့လုံခြုံရေးက စိတ်ချရရဲ့လား တဲ့ ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ စိတ်ချရတယ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်ဖူး လို့ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လောက်သေချာနေရတာလဲတဲ့
ငါ့မှာ ဆဌမ အာရုံရှိတယ်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ထားလိုက်..
မကောင်းလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ကောင်းတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အာဏာရချင်တယ်၊ သမ္မတ လုပ်ချင်တယ်လို့ စပြီးပြောခဲ့တာလဲ သူပဲလေ။
ပြောနေတဲ့ မျက်နှာပေး လေသံဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီး သဘောကျလိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: နိုဝင်​ဘာ ၈ ရက်​​နေ့ မဲ​ပေးနိုင်​ရန်​အတွက်​ သံဃာ ရှစ်​​သောင်း​ကျော်​ လူဝတ်​လဲ ဟု ကြားသိရပါ​ကြောင်း ဒူဟူဟူ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: အဖွဲ့ချုပ်ရှုံးရင်.. မဘသကို သမိုင်းတရားခံအဖြင့်တင်လိုက်ကြ..။
kai says: Ant Bwe Kyaw ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်တွင် မဲရုံရှိ ကြိုတင်မဲထည့် မဲပုံးကို ဘုန်းတော်ကြီးမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ယူဆောင်မှု ဖြစ်ပွား
ယမန်နေ့ ( နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် ) ညဦးပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ( ၂ )၊ ဆင်မင်းအိုင်ကျေးရွာတွင် ရပ်/ကျေး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှိ ကြိုတင်မဲထည့် မဲပုံးကို ဆင်မင်းအိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်သုနန္ဒက လာရောက်ယူဆောင်သွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၈၈မျိုးဆက်( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးမှ ယနေ့သတင်းရရှိသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်သုနန္ဒသည် ကြိုတင်မဲပုံးကို မဲရုံမှ ၎င်း၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ယူဆောင်သွားပြီးနောက် ၎င်းအလိုရှိသူများကို ကြိုတင်မဲများ ပေးစေခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် နံနက်တွင် ခရမ်းမြို့နယ် ရပ်/ကျေးကော်မရှင်မှ မဲပုန်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပြန်လည်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ယမန်နေ့ ညဦးပိုင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ မဲပုံးယူဆောင်သွားစဉ်တွင် ကြိုတင်မဲ ၆ မဲ သာရှိခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပြန်ယူဆောင်ခဲ့ချိန်တွင် ကြိုတင်မဲပေါင်း ၁၇ မဲ ဖြစ်နေပြီး ယမန်နေ့ညက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကြိုတင်မဲ ၁၁ မဲ ပေးစေခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်ဟု ခရမ်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ကိုသိန်းဇော်လတ်ထံမှ ကြားသိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အရာရှိ၊ ဦးခင်ဇော်ထွန်းထံသို့ ၈၈မျိုးဆက်( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးမှ သတင်းပို့ တိုင်ကြားထားသည်။
မြစပဲရိုး says: အဲဒီလို ညစ်ပတ်ယုတ်မာ တာ နိုင်ငံတော် ကို အသရေဖျက်တာဘဲ။
ဒီလို အမှုတွေ ကို ထောင်ဒါဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပေး ပစ္စည်း ဥစ္စာ အကုန်သိမ်း သင့်မယ်။
ဥစ္စ္စာရူး တွေမို့ ဥစ္စာ နဲ့ခြောက်မှရမလားဘဲ။ Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ထွက်ပေါ်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအပေါ် လေးစားလိုက်နာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ အစိုးရ၊ တပ်မတော် အနေနဲ့ တရားမျှတလွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများရဲ့ ရလဒ်ကို လေးစားလိုက်နာ သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်မံပြောကြားလိုပါ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များနဲ့ အညီ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသစ်ကို အတူလက်တွဲ ပုံဖော်ဖန်တီး ဆောင်ရွက် သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အကြို နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပြောကြားသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်း
kai says: ဒီနေ့ဟာ
အိုးဝေ လို့ ထတွန်တဲ့နေ့
အိုးဝေ လို့ ထတွန်တဲ့နေ့
‪#‎မင်းကိုနိုင်‬ ၈ ၁၁ ၂၀၁၅
မြစပဲရိုး says: (ကို) မင်းကိုနိုင်၊ (ကို) ကိုကိုကြီး တို့ အပါအဝင် ၈၈ကြီးများ အတွက် လဲ တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သဘောထားကြီးမြင့်ခြင်း က အနာဂါတ်လူငယ်တွေ အတုယူဖို့ သမိုင်းထဲ မွှေးရနံ့သင်းကျန်နေတော့မှာပါ။
ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ ပြည်သူတွေ အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ အားလုံး ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ အင်အားမပါရင် ဒီလို ရလဒ် ထွက်/မထွက် မပြောနိုင်ပါ မဟုတ်လား။
kai says: သေဆုံးသွားသည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ ကြက်ခြေခတ်ထားသော်လည်း မဲအများဆုံးရ
Tuesday, 10 November 2015 06:15 Print Email မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၉
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် နှစ်ရက်ခန့်အလိုတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းခရိုင် မြင်းမူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမြင့်နေရာကို ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်တွင် မင်ဖြင့် ကြက်ခြေခတ်ထားသော်လည်း ယင်းနေရာတွင်သာ မဲပေးခဲ့ကြပြီး မဲအများဆုံး ရရှိကြောင်း မြင်းမူမြို့နယ် NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးစံသက်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
ပြည်သူအများစု မဲပေးသော်လည်း သေဆုံးသွားသဖြင့် အဆိုပါမဲများကို ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မြင်းမူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာအတွက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က အနိုင်ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
“ပယ်မဲတွေ တချို့နေရာဆို ထောင်နဲ့ချီ ရှိတယ်။ မဲလက်မှတ်ပေါ်မှာ လိုင်းတားထားတာတောင် သူ့ကိုပဲမဲပေးထားကြတယ်” ဟု ၎င်းက ထပ်မံဆိုသည်။
မြင်းမူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမှတ် (၁) နေရာမှလွဲ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး အမှတ် (၂) နေရာအတွက် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိထားကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
“ဦးစိုးမြင့် ကွယ်လွန်သွားတာကို အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ဆုံးရှုံးသလို ခံစားရတယ်” ဟု ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်တွင် ဦးစိုးမြင့်ကို မဲပေးခဲ့သည့် ဦးမိုးသက်တင်က ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သေဆုံးသွားသဖြင့် ၎င်းကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မှာ ရိုက်နှိပ်ထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းနေရာတွင် မဲပေးထားပါက မခိုင်လုံမဲအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အရာရှိ ဦးဇော်နောင်လတ်က ပြောကြားထားသည်။
NLD ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမြင့်သည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် နှစ်ရက်အလို နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်က စည်းရုံးရေး ဆင်းနေစဉ် မူးလဲကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နာရေးချခဲ့သည်ဟု ယင်းဒေသခံများက ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြင်းမူမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တွင် USDP ပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှစ်ဦးသာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
– See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/8838-tst#sthash.63LX4Lxt.dpuf
kai says: တကယ်လို့ ၁၉၉၀ ကို မှတ်မိမယ်ဆိုရင် အဲဒါက အခုအတိုင်းပါပဲ။ မေလ ၂၇ ရက်မှာ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြတယ်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ တကယ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ အားလုံး အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ ပြည်သူတွေ တကယ်ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ၂ လကြာတဲ့အခါ၊ ၂ လ တိတိကြာတဲ့အခါ၊ န၀တ အစိုးရက ပါတီတခုကို အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးနိုင်ဘူး၊ တခြားပါတီတွေလည်း အမြောက်အများရှိသေးတယ်။ သူတို့ အတွက်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ သဘောရတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအချိန်က ၄၈၅ ဦးရှိတဲ့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အစား ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ နဲ့ သူတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ထားသူ ၆၀၀ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသား ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ စိတ်ပျက် ဒေါသ ဖြစ်ခဲ့ရတာကို ကျနော် မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခု အချိန်မှာတော့ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ကျနော် မထင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ ခေတ်အခါမှာ အဲဒါက အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ Facebook နဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကထက်စာရင် အများကြီး ပွင့်လင်းလာပါပြီ။ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာက တကယ်လို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အမှန်တကယ် အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့က NLD ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။
ဘာတေးလ် လင့်တနာ (Bertil Lintner) နှင့် ဧရာဝတီက ဆွေးနွေးခြင်း ( နိုဝင်ဘာ ၉ ၂၀၁၅)
Ma Ma says: အခုတစ်ခါမှာတော့ အရင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့သူက ပြည်သူကို အချိန်ကိုက် လိုက်နာသင့်တာတွေ သတိပေးတယ်။ ပြည်သူတွေက လေးစားလိုက်နာတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရော၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရော တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာကတော့ အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ ထူးခြားချက်ပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: A rose by another name
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘီဘီစီနဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ သူ့ပါတီက ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ အထက်မှာ သူရှိမယ်လို့ ပြောခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အမည်မခံတဲ့ သမ္မတ ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောပြီး၊ အဲဒါကို ဥပမာအနေနဲ့ “နှင်းဆီ ပေမယ့် တခြားအမည်နဲ့ နှင်းဆီ” (A rose by another name) ပေါ့လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောဆိုသွားပါတယ်။
kai says: “A rose by any other name would smell as sweet” isafrequently referenced part of William Shakespeare’s play Romeo and Juliet, in which Juliet seems to argue that it does not matter that Romeo is from her rival’s house of Montague, that is, that he is named “Montague.” The reference is often used to imply that the names of things do not affect what they really are.
kai says: Speaking to Channel NewsAsia at her home on Tuesday (Nov 10), Suu Kyi said if NLD wins, the chosen president will be appointed “just to meet requirements of constitution”. “He will have to understand this perfectly well that he will have no authority, that he will act in accordance with the decisions of the party,” she said. “That is the only logical way to do it. Because in any democratic country, it’s the leader of the winning party that becomes the leader of the government. If this constitution doesn’t allow it, then we will have to make arrangements so that we can proceed along usual democratic lines,” Suu Kyi added.
“They will have to be open to negotiations as soon as we formagovernment,” she added.
kai says: Channel News Asia နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်တာဗျူး ရုပ်-သံ( 10.11.2015 ) ဘာသာပြန်
ဖြေ ။ ။ သမ္မတ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးကို ကျမကဘဲ ချမှာပါ……..ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျမက ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်မို့လို့ပါဘဲ ။ သမ္မတဆိုတာက အခြေခံဥပဒေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်သာ ကျမတို့က ရွေးချယ်တဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။
kai says: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)
တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
kai says: ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/ ၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်)
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
သတင်း မီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရ “မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်ပါသည်-
(၁) ဦးခင်မောင်လေး (ခ) ဖိုးသောကြာ (ခေတ်+မိုး) ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးဖေမြင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)
(၃) ဒေါက်တာ မျိုးသန့်တင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)
(၄) ဦးမင်းဟန် ဘဏ္ဍာရေးမှူး
(၅) ဒေါက်တာ မောင်မောင်စံ စာရင်းစစ်
(၆) ဦးဟန်ညွန့် (ဦးဟန်ညွန့် ဥပဒေ) အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဦးအောင်လှထွန်း အဖွဲ့ဝင်
(၈) ဦးတင်မောင်အေး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ဦးဇေယျ အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ဦးမြင့်ကျော် အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ဒေါက်တာ တင်လှိုင် (ဘိုးလှိုင်) အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ဦးအုန်းကြိုင် (ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင်) အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ဒေါက်တာ တင်ထွန်း (သထုံ တင်ထွန်း) အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ဦးချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ) အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) ဦးသိမ်းစိုး အဖွဲ့ဝင်
(၁၆) ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဦးမြင့်မောင်မောင် အဖွဲ့ဝင်
(၁၇) ဒေါက်တာ ဇော်သန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၈) ဦးမျိုးမင်းယု (ခ) ဦးမျိုးကိုမျိုး အဖွဲ့ဝင်
(၁၉) ဦးဇေယျာလှိုင် အဖွဲ့ဝင်
(၂၀) ဦးခိုင်မြတ်ကျော် အဖွဲ့ဝင်
(၂၁) ဦးဟံသာညိန်း (အေဂျင်စီ) အဖွဲ့ဝင်
(၂၂) ဦးသီဟစော အတွင်းရေးမှူး
(၂၃) ဒေါ်သင်းသင်းသာ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)
(၂၄) ဦးကျော်စွာမင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂)
kai says: Don’t move closer to US, China paper warns Myanmar
BEIJING • A Chinese Communist Party-linked newspaper has warned Myanmar not to leave China’s embrace for the United States, as opposition leader Aung San Suu Kyi’s party was slated to wrest power from the military-backed government.
But China’s extraction of raw materials spurred popular anger across Myanmar, and Ms Suu Kyi and her National League for Democracy have vowed to better represent the will of the people.
As Myanmar’s quasi-civilian government has moved towards open elections and worked to improve relations with Western countries, ties with China have moved “from special to normal”, the Global Times said in an editorial.
Moving closer to the US would be “a witless move (that) would ruin the strategic space and resources it can obtain from China’s amicable policies”, the editorial said.
“China has been strategically magnanimous and kind.”
One of Myanmar President Thein Sein’s first major acts after assuming power in 2011 was to halt construction of the huge Chinese-backed Myitsone dam. In an apparent reference to the project in Kachin state, the editorial said “the disruption of large programmes between the two sides does not serve Myanmar’s interests”.
A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on November 11, 2015,
kai says: ယူအက်စ်နဲ့ စိန့်ပြည်ကြား ဒေါ်စုတော်တော်ကစားယူရလိမ့်မယ်။
kai says: 7Day News Journal
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီသည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မဲရလဒ်ကြေညာချက်များအရ အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့် အရေအတွက်ကိုပင် ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
ဒီချုပ်အစိုးရဖွဲ့ရန်သေချာသွားသည့် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်သည် တိုက်ဆိုင်စွာပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ၅ နှစ်ပြည့်ချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မတ်လ မရောက်မချင်း တက်မထောင်လို့ မရသေးဘူး
ဒီအချိန်မှာ ဘာ မှ ကိုယ့် ဖက်က အမှားမရှိအောင်နေရမယ့် အချိန်လို့ ခံယူပါတယ်
ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ လမ်းမပေါ်ပြန်တက်တာထက် ဘာမှ ပိုမလုပ်နိုင်သေးတာ အမှန်ပါဘဲ
နိုင်ငံတကာဆိုတာက လဲ အရမ်းတော့ အားကိုးလို့ မရ ပါဘူး အားလုံးမှာလည်းကိုယ့်ပြဿနာနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေလို့ပါ
မြစပဲရိုး says: လက်ရှိ စီးပွါးဖြစ်ပြီး သား လုပ်ငန်းအကြီးကြီးရှင် ခရိုနီ ကြီးများ က တိုင်းပြည် အဆိုးဘက်ရောက်သွားမှာ ကို ကျွန်မ တို့ထက် ပိုပြီး ကြောက်ပါတယ်။
အခုလဲ ဒီဇင်ဘာ အစမှာ Stock Exchange စဖွင့် မှာမို့ နိုင်ငံရေး မငြိမ်အောင် ထိ ရဲ မယ် မထင်ပါဘူး။
အဲဒါလဲ သူတို့ ဂွင် အကြီးကြီး ပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ မပေါ့ဆဘဲ သတိကြီးကြီး နဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပြီး စည်းကမ်းရှိရှိ စောင့်စည်း မှု တွေ လုပ်သင့်တာတော့ အမှန်ပါ။
ခွင့်လွှတ်သင့်တာ တွေ၊ သင်ပုန်းချေ ဖို့ တွေ ကိုလဲ နှစ်ဖက်လုံး လက်ခံကြဖို့ လိုပါတယ်။
ကျောင်းကုန်း ကိစ္စ ကိုလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တရားမစွဲပါဘူးလို့ ပြောလိုက်ပြီ။
တစ်နေရာ နှစ်နေရာလောက် နဲ့ ပြသနာ အဖြစ်ခံနေတာ မတန်ပါလေ။
အခုဆို လိုတာထက်တောင် အများကြီး ပို နေပါပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငိုးမအဆိုးဓမြလို စဲလျဲဒါ ဒီရွာမှာ အခြားမည်သူ ယှိသနီး… ငှါကွ..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငါလခွီး.. ငိုးမအဆိုးဓမြလို့ ဆဲတာ လမှာ အောက်ကမြင့် ကြံသွားတယ်..
မြစပဲရိုး says: ကြောင်ပါတယ် ကြောင်ကြောင်ရယ်။
မွှားလို့ ကြောက်ပါတယ် ကြောင်ကြောင် ရယ် ….
kai says: Myanmar’s Election Sparks Online Calls for Elections in China
As Myanmar awaits the final results of the weekend’s landmark elections in which the opposition National League for Democracy (NLD) has claimedahuge victory, the process has been closely watched in China, sparking calls for similar reforms on social media.
Sun Liping, professor of sociology at Beijing’s presitigious Tsinghua University, hit out at the official view of the ruling Chinese Communist Party that democratic politics aren’t suitable for China, saying: “Actually, democracy isanormal way foranormal society to behave.”
“It isaway of life that allows for human nature,” Sun wrote inapost to the Twitter-like service Sina Weibo on Tuesday. “Just because the grown-ups told the kids in the past not to talk and eat at the same time, doesn’t mean that talking and eating are incompatible.”
မြစပဲရိုး says: ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ (ဦး)သန့်မြင့်ဦး ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ကားကြပ်တာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် အစိုးရအသစ် ဆီက မျှော်လင့်ကြောင်း ရေးထားတာလေး ကို ဖတ်မိလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ အခြေအနေ က လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မဖြစ်သေးတာမို့ တကယ်ဘဲ အလုပ်လုပ်မဲ့ အစိုးရသစ် ဖွဲ့နိုင်လိုက်ဖို့ သူတို့ လို ပုဂ္ဂိုလ်များ ရဲ့ တွန်းအား လဲ လိုတာမို့ (ဦး)သန့်မြင့်ဦး မှလည်း ဝိုင်းဝန်းတွန်းပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတာပါဘဲ။
(အရင်/လက်ရှိ အစိုးရ ကိုတော့ ဘာလို့ ဒီလို မပြောခဲ့ပါလိမ့် လို့ မတွေးတော့ပါဘူး)
Cars are destroying Yangon. The city on election day with little traffic was an infinitely better place. It can be like that every day. I hope whoever is the new Chief Minister of Yangon will make investments in mass transit and walkabilityahigh and urgent priority.
ဇီဇီခင်ဇော် says: လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တဲ့သူကို တောင်းတာထင်ပါရဲ့။
kai says: ဦးသန့်မြင့်ဦးကို.. ရန်ကုန်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ..တနေရာရာပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ကားကြပ်တာက.. မြို့ကအင်မတန်သေးတဲ့ကြားထဲ… လမ်းတွေက… လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀၀ကျော် မြို့တည်ကစ ကိုအခြေခံထားတာက စတယ်ထင်တာပဲ..။
ကျုပ်သာဆို.. မြေပေါ်တံတားထိုး..။ မြေအောက်လှိုဏ်တူးပြီး.. ဒလနဲ့ဆက်ပစ်တယ်..။
ဒီနေ့… ရန်ကုန်ကို.. အယ်လ်အေနဲ့ညီအမမြို့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ..သိပ်မတိုးတာမို့.. အယ်လ်အေဆိပ်ကမ်းကို.. သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းနဲ့ညီအမဆိပ်ကမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့.. ပထမခြေလှမ်းစလှမ်းတယ်..။
ယူအက်စ်ဖက်က.. ကလင်တန်ဒေါ်ဒေါ် သမ္မတဖြစ်မှပဲအိုကေမယ်ထင်တာပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: KUNMING, Nov. 11 (Xinhua) — Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Wednesday that China is confident that Myanmar will continue its friendly diplomacy towards the country.
kai says: Dalai Lama: Stop praying for Paris — humans created this problem and humans must solve it
17 Nov 2015 at 10:39 ET “We cannot solve this problem only through prayers,” the spiritual leader said. “I amaBuddhist and I believe in praying. But humans have created this problem, and now we are asking God to solve it. It is illogical. God would say, solve it yourself because you created it in the first place.”
ဦးကျောက်ခဲ says: သဂျီးလည်း လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ ကျော်က အခင်းအကျင်းကို လွမ်းသဂိုး…
စတာဘာ… စတာဘာ… ဟီ ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ……… ++++++++++++++++++++++++++++
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဖိုးလပြည့် လာရောက် တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်ည နေ ပိုင်းက တပ်မတော် အကြီးအကဲဟောင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် ခေါ် ဖိုးလပြည့် က နေအိမ်သို့ လာရောက် ၍ သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် အခြေစိုက် The Voice သတင်းထောက် က သတင်းပေးပို့သည်။
“ဖိုးလပြည့် ကတွေ့ခွင့် တောင်းတယ်၊ သူအဖိုးက စကားပါးလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်” ဟု ၎င်း က ဆက်လက် သတင်းပေးပို့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက နိုင်ငံပေါင်း ၄၂ နိုင်ငံမှ သံတမန်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဖိုးလပြည့် ၏ ခွင့် တောင်းခံမှုအရ နှင်းဆီစံအိမ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံမှုတွင် အချိန်မည်မျကြာသည်ကို ပြောကြားမရနိုင်သော်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာသေချာကြောင်း NLD ပါတီ အတွင်းပိုင်းနီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောဆိုထားသည် ။
နေရွှေသွေးအောင် က သူ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် “ဒီနေ့ည… သမိုင်းတွင်မယ့်ညတစ်ည “ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
November 16 at 12:02pm ·
“When I hear folks say that, well, maybe we should just admit the Christians but not the Muslims; when I hear political leaders suggesting that there would beareligious test for whichaperson who’s fleeing fromawar-torn country is admitted, when some of those folks themselves come from families who benefitted from protection when they were fleeing political persecution—that’s shameful. That’s not American. That’s not who we are. We don’t have religious tests to our compassion.” —President Obama: http://go.wh.gov/Qr48Yt
kai says: Save 30%–the year’s lowest price for AncestryDNA.
Your loved ones can discover their ethnic origins and make new family connections with this simple AncestryDNA test.
thanks so much for your AncestryDNA order.
We’ll get your DNA kit on its way soon. We’ll be sure to let you know when it’s shipped. Once you get your kit, just send us your saliva sample in the tube provided, and we’ll start the DNA analysis. Your results will likely take 6-8 weeks.